Qor Qormadayda Soomaaliya
Shaqsigaaga Nooca Qormadayda adiga oo aan bixin lacag qarsoon. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Sida Looga Iibsado Qormada Qorayaasha Tacliinta
Nooca Adeegga Qormada ee ardayda mashquulsan ee u baahan inay ku guuleystaan ​​tacliimeed waxaa ka buuxa waxyaabo lala yaabo. Hadday tahay xaalad caafimaad oo lama filaan ah ama daal wax u dhimaya ama booqasho lama filaan ah oo saaxiib aad ku kalsoon tahay, waxyaabo ayaa had iyo jeer kugu soo kici kara jidkaaga si aad u hesho natiijooyinka tacliimeed ee la jecel yahay. Waxa muhiimka ah waa inaad awoodid inaad ka wada gudubto waxaas oo dhan oo aad la socotid waxbarashadaada. Dad badan ayaa dhib kala kulma inay dhameeyaan kuleejka oo ay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho sababtoo ah waqtiga ayaa ka dhamaaday si ay ula kulmaan dalabaadkooda. Tani waa halka ay ka faa'iideystaan ​​adeegyada qoraa curis wanaagsan.
Xalka ugu fiican ee dhibaatadan waa adiga oo helaa qoraa xirfad leh oo ku caawiya. Waxaa maalmahan internetka ku jira qorayaal curis xirfad badan leh. Laakiin dhammaantood ma wada kulmeen wixii aad ka filaysay. Maaddaama waqtigu qaali u yahay ardayda badankood, waxaa ugu wanaagsan inaad hesho caawimaadda qorayaasha curinta ee la kulmi kara waqtigaaga ugu dambeeya isla markaana siin kara natiijo dhammaystiran oo lagu qanco. Qaar badan oo ka mid ah qorayaashan ayaa siin doona qiime u tartamaya qorayaasha kale si ay kalsoonidaadu u kasbato.
Inta badan qorayaasha shaqaalaynta waxay leeyihiin khibrad badan oo maadooyin kala duwan ah. Waxay yaqaanaan sida loo qoro noocyada qormada. Waxaad ka dooran kartaa mowduucyo fara badan sida Dhacdooyinka taagan, Taariikhda iyo Fasalka Maanta, Ciyaaraha, Safarka iyo kaftanka, iyo Qalabka Qoraalka. Caawintooda, waxaad kuheli kartaa qormooyin layaableh oo saameyn ku yeelan kara borofisarradaada iyo akhristayaashaada. Caawintooda, waxaad kuheli kartaa qormo khadka tooska ah waqti la'aan.
Markaad raadineyso shirkadda qorista qormada ee ku siin kara adeegan, waa inaad marka hore hubisaa inay yihiin shirkad sharci ah. Iyada oo ay sii kordhayaan tirada qorayaasha maanta, waxaa jira kuwa isku dayaya in ay lacag ku helaan iyaga oo bixinaya waxa loo yaqaan adeegyada xatooyada. Sababtoo ah dhibaatooyinka sii kordheysa ee xatooyada ee qoraalka qoraalka tacliinta, inta badan hay'adaha tacliinta waxay u baahan yihiin qorayaasha in loo shaqaaleysiiyo iyadoo loo eegayo baahida loo qabo si looga fogaado wixii arrimo ah ee ku saabsan xatooyada.
Arday badan ayaa maanta u baahan inay adeegsadaan adeeg qorista qormada sababtoo ah baahida sii kordheysa ee waraaqaha waxbarashadooda. Si loo buuxiyo shuruudaha macallimiintooda iyo si ay ugu guuleystaan ​​imtixaanadooda, arday badan ayaa hadda u weeciya qorayaasha xirfadleyda ah si ay ula kulmaan dalabaadkooda. Haddii aad raadineyso qorayaasha curinta ee New York, waxaa jira shirkado badan oo la heli karo. Waxaa muhiim ah inaad doorato kaliya kuwa ku siin kara adeeg tayo leh. Caawintooda, waxaad kuheli kartaa warqad aqooneed layaableh oo hubaal qancin doonta borofisarradaada iyo akhristayaashaada.
Maaddaama qorayaashan shaqaalaynta ay leeyihiin waayo-aragnimo ku filan oo ku saabsan qoraalka qorista tacliinta, waxay yaqaanaan sida si habboon loogu qaabeeyo shaqadaada oo lagugu hago inta lagu jiro hawsha oo dhan. Waqti iyo dadaal waad ku badbaadin kartaa adiga oo shaqaaleeya qof howsha horey u soo maray. Qorayaasha qormooyinka khibradda leh waxay awoodi doonaan inay fahmaan arrimaha badan ee laga yaabo inaad la kulanto markii aad curinta qormadaada.
Markaad go'aansato inaad qorto qoraa, talaabada xigta waa inaad go'aamiso mawduuca ama dulucda waraaqdaada waxbarasho. Tani waa qaybta ugu muhiimsan, maadaama ay noqon doonto mid ay qorayaasha kale ka shaqeyn doonaan. Mawduuc ku habboon mawduucaaga ayaa ku siin doona fursad sare oo aad ku hesho dokumenti tacliimeed oo la aqbali karo. Waxa kale oo aad weydiin kartaa aqoonyahannada kale ee khibrada u leh qormada noocan ah si aad uga hesho fikrado iyaga ka mid ah.
Si aad qormooyin uga iibsato shirkad sumcad leh, isku day inaad shirkadda kala xiriirto taleefanka. Wakiilada iibka badanaa xiriir wanaagsan ayey la leeyihiin shirkadaha ay la macaamilaan. Xitaa waxay awood u yeelan karaan inay kugula taliyaan shirkad wanaagsan oo ku siin karta alaabada ugu tayada fiican qiimaha ugu hooseeya. Wax kastoo aad sameyso, ha dooran qiimaha ugu hooseeya si aad lacag u keydsato. Weli waad ka iibsan kartaa qormooyin tayo sare leh oo si wanaagsan loo qoray shirkadahaas qiimo macquul ah.